» Akhri Warbixin Caalami ah: Caqabadaha Waaweyn ee horyaala Mudane FARMAAJO…Badweyntimes.com
Akhri Warbixin Caalami ah: Caqabadaha Waaweyn ee horyaala Mudane FARMAAJO…
Wargeyska The Financial Times ee ka soo baxa dalka Britain ayaa Warbixin dheer ka qoray Shaqo maalmeedka soo wajahi karta Madaxweynaha DFS, Maxamed C/llaahi Farmnaajo tahay caqabado ballaaran, oo ay ka mid yihiin Musuqa Maaliyadda, Maqnaanshaha Ammaanka, Awood La’aanta Dowladda Dhexe, Ciiddanka iyo Abaaraha.
Somalia ma soo marin Dowlad waxtar leh 25-sanno ee la soo dhaafay, iyadoo Xaaladda Nololeed iyo Ammaanka ahaayeen kuwo adag tan iyo markii uu bilowday Dagaalka ay Dowladda kula jiraan Xarakadda Alshabaab sannadkii 2007-dii.
Wargeyska waxa uu sii qoray inay arrimahaasi keentay inuu dalka u baahdo 20,000 oo Askar Shisheeye ah si ay gacan uga geystaan Dagaalka Alshabaab, balse aysan ku guuleysanin, iyadoo ay u sii dheereyd colaadaha Beelaha.
Wargeyska The Financial Times waxa uu sii qoray inaysan Somalia lahayn Ciiddan Qaran, balse ay jiraan Warqado lagu muujiyey Taageero Maaliyadeed oo dhan Billions Dollar, iyadoo ay ahayd inay dagaalkaasi qaadaan Ciiddanka Dowladda, halkii Maleeshiyo Beeleed la hawl gelin lahaa.
Warbixinta ayaa lagu muujiyey in mid ka mid ah Diplomaasiyiinta sheegay mar wax laga weydiiyey arrimaha Ciiddanka Somalia waxa uu yiri:- “Anigu marnaba ma arkin maalgelin heerkaasi ah oo aan lahayn Natiijo la caddayn karo”.
Wargeyska waxa kale oo qoray in Awood La’aanta Dowladda Dhexe keentay inaysan ka hawl-gelin qeybo badan oo ka mid ah dalka, iyadoo Goballaddii ugu waa weynaa ee dalka, sida Somaliland ku dhawaaqeen inay ka go’een Dowadda Dhexe sannadkii 1991-kii,
Dowladda waxaa kaloo hor yaalla iyadoo uusan jirin Nidaamka Garsoorka ama Nidaamka Canshuurta Caadiga ah, waxayna marnaanshahaasi u oggolaatay inay Hay’addaha Gaarka ka hawl-galaan.
Taasi ayaa keentay inay Dowladda lahayn wax Maaliyad oo dib loogu laaban karo, iyadoo daynta sannadkiiba gaarto 5 Billion oo Dollar, Kharajka Adeegga Garoonka Diyaaradaha ka soo xerooda oo keliya ayaa lagu dhaqdhaqaaqa
Wargeyska waxa uu sii qoray inaysan jirin Sharuuc ama Nidaam lagu hago Maalgashiga Shisheeyaha, iyadoo mususq saamayn ku yeeshay dhamaan Qeybaha iyo Waaxyaha Dowladda iyo Bulshadda.
Qiimeynta Hay’adda Transparency International ee la daabacay bishii hore, waxay Somalia noqotay dalka ugu musuqa badan Caalamka sannadkii 10-aad.
Dhinaca kale, The Financial Times waxa uu ka so oxigtay Diplomaasiyiinta inay sheegeen inuu Madaxweyne Farmaajo dhibaato kala kulmi karin xakamaynta hamiga danaha Khaaska (Personal Interests).
Mid ka mid ah Diplomaasiyiinta ayaa yiri:- “Weligay ma aan maqlin u danqasho leh dadka , gaar ahaan Kooxaha Siyaasadda”.
Diplomaasiyiinta waxay Madaxweyne Farmaajo uga digeen haddii uusan xaqiijinin tallaabo rasmi ah inuu si degdeg ah u lumin doono Deeq-bixiyayaasha.
« Warbixinta Ka HoreysayDEG DEG: Al shabaab oo Qarax Xoogan ku dilay Saraakiil ka tirsan C.X.D.S…[Magacyo]
Warbixinta Xigto »XOG WARAN: Shaqsi si aad ah loo hadal hayo in loo magacaabo Xilka R/wasaaraha Somalia..